မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန <br>Department of Myanmar Examinations
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ နမူနာ
Read more about ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ နမူနာ
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ စာတတ်မြောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပိုစတာ
On 8 September 2018, International Literacy Day will be celebrated around the world with the theme ‘Literacy and skills development’. Despite progress made, literacy challenges persist, and at the same time the demands for skills required for work, evolve rapidly. This year, ILD explores and highlights integrated approaches that simultaneously can support the development of literacy and skills, to ultimately improve people’s life and work and contribute to equitable and sustainable societies.
Read more about ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ စာတတ်မြောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပိုစတာ
၂၀၁၉-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ‌ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အတွက် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ( ၂၀ )ရက်
၁။ ၂၀၁၉-ခုနှစ် တွင် ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ နှင့် ပတ်သက်၍ ဝင်ရောက် ‌ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ သိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာ အပ်ပါသည်။
Read more about ၂၀၁၉-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ‌ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အတွက် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) 27”x34” (70-gsm) ရွက်ရေ ( ၅၀၀ ) ပါ (နိုင်ငံခြားစက္ကူဖြူ) ( ၁၃,၀၀၀ ) ထုပ်
(ခ) 24”x34” (70-gsm) ရွက်ရေ ( ၅၀၀ ) ပါ (နိုင်ငံခြားစက္ကူဖြူ) ( ၁,၀၀၀ ) ထုပ်
Read more about ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ် နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက် စာမျက်နှာသစ် လွှင့်တင်
A new website regarding development of new reform basic education curriculum is hosted today.
Read more about အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ် နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက် စာမျက်နှာသစ် လွှင့်တင်
၂၀၁၈ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကြည့်ရှုရန်
၂၀၁၈ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 2018.myanmarexam.org
Read more about ၂၀၁၈ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကြည့်ရှုရန်
၂၀၁၈ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကို (၂ - ၆ - ၂၀၁၈) ရက် ၊ စနေနေ့ နံနက် ( ၀၆:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်
၁။ ၂၀၁၈ - ခုနှစ် ၊ မတ်လအတွင်းက ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကို (၂ - ၆ - ၂၀၁၈) ရက် ၊ စနေနေ့ နံနက် ( ၀၆:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ အဆိုပါအောင်စာရင်းများကို မြို့နယ်အသီးသီးရှိ သက်ဆိုင်ရာ စာစစ်ဌာန ကျောင်းများတွင် တစ်ချိန်တည်း ကပ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ထို့အပြင် - အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ - ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ - ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၃) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ - လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ - ဒဂုံမြို့နယ် ၊ အမှတ် ( ၂ ) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း နှင့် - သ
Read more about ၂၀၁၈ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ကို (၂ - ၆ - ၂၀၁၈) ရက် ၊ စနေနေ့ နံနက် ( ၀၆:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်
၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 3.2 MB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 6.9 MB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 6.0 MB)
Read more about ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်ပ)
၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)
(၁) မြန်မာစာ (PDF, 24.3 MB)
(၂) အင်္ဂလိပ်စာ (PDF, 20.8 MB)
(၃) သင်္ချာ (PDF, 16.2 MB)
Read more about ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ (ပြည်တွင်း)
2018 Myanmar-Korea Educational Cooperation Workshop
From January 10 to 16, 2018, Department of Myanmar Examinations (DME) and Korea Institute for Curriculum and Evaluation (KICE) jointly hosted and organized "2018 Myanmar-Korea Educational Cooperation Workshop" in Yangon, Myanmar.
The purpose of this workshop was to share knowledge and experience on national/international level student assessment of both countries, based on the Memorandum of Understanding (MOU) signed between two Education Ministries of the Republic of Korea (ROK) and the Union of the Republic of Myanmar in November 2016.
Read more about 2018 Myanmar-Korea Educational Cooperation Workshop
© 2020 by Myanmar Examinations Department